အပူရှိန်ကြောင့် နွမ်းနယ်မှု (Heat Exhausation)
on: 28 Sep, 2017
လူတစ်ယောက်သည် ပူသောရာသီ၌ဖြစ်စေ ပူသောပတ်ဝန်းကျင်၌ဖြစ်စေ နေသည်မှာကြာလာပါက ချွေးအလွန်ထွက်၍ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ရေနှင့်ဆားဓာတ်များ လျော့ပါးကုန်သဖြင့် သွေးဖိအားကျကာ မောပန်းနွမ်းနယ်နိုင်သည်။ ဤသည်ကို အပူကြောင့် နွမ်းနယ်ခြင်း သို့ အပူမောပန်းခြင်းဟုခေါ်၏။အပူနွမ်းခြင်း လက္ခဏာများ. နေထိုင်၍ မကောင်းခြင်း. သတိမေ့ခြင်း. အားနည်းသည်ဟုခံစားရခြင်း. ချ...
ရေချိုး သန့်စင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သည်များ
on: 25 Sep, 2017
သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ရေချိုးခြင်းဟာ မျက်နှာကိုရော ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ စစ်မှန်တဲ့ ပြုစုနည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့အတူ ရေချိုးတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များကိုလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။• ရေနွေးနဲ့ ချိုးတာဟာ ချွေးပေါက်တွေကို ပွင့်ထွက်စေသလို ပိတ်ဆို့မှု၊ ပြည့်ကျပ်မှုတွေကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်။ သတိထားဖို့ကတော့ မိမိရဲ့ အသားအရမှာ အတွန့်အရေးအကြောင်းတွေ ရှိမယ်၊ ဆံခြည်မျှင် သွေ...
on: 24 Sep, 2017
ကားတာယာမှ ထွက်ရှိလာသော မမြင်နိုင်သည့် အမှုန်အမွှားတွေက အဆုတ်ကို ထိခိုက်နိူင်တယ်လို့ သုတေသီတွေက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ မော်တော်ကား တာယာမှာ အမည်းရောင်ကာဗွန် နာနိုအမှုန် အမွှားတွေက သိသာတဲ့ပမာဏ ပါဝင်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ ကာဗွန်အမည်းအမှုန်တွေက ဆေးလိပ်သောက်သူတွေမှာလိုမျိုး DNA ပျက်စီးမှုနဲ့ အဆုတ်ပွရောဂါ ရရှိနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆေးလိပ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ အဆုတ်ပျက်စီးမှုဟာ ကုသလို့မပျောက်ကင်းနိ...
သွားနုတ်ပြီးရင်လိုက်နာရမယ့် အချက်တွေကတော့ သွားနုတ်ပြီးတဲ့အခါ ဂွမ်း ဒါမှမဟုတ် ပတ်တီးစ ဒါမှမဟုတ် Gauze ကို ဆရာဝန်တွေက ထည့်ပေးပြီး ကိုက်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ အဲဒီကိုက်ခိုင်းတဲ့ Gauze ကို ဘယ်အချိန်ထိ ကိုက်ရမလဲဆိုတော့ အနည်းဆုံးတစ်နာရီထိ ကိုက်ထားသင့်ပါတယ်။ တစ်နာရီခွဲလောက်ထိ ကိုက်နိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ အရင်တုန်းက ဆရာတို့ရဲ့ ဆရာတွေသင်ကြားတာကတော့ သွေးခဲဖို့အတွက် ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတယ်လို့ ပြောပါ...
အစာအိမ်နာ ခေါ် လေနာရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲရှုပ်ထွေးမှုများ
on: 18 Sep, 2017
(၁) အဖြစ်အများဆုံးသော ပြဿနာမှာ အစာအိမ်နာမှ သွေးယိုစီးခြင်းဖြစ်သည်။ အစာအိမ်အနာပိုဆိုးလာသည်နှင့်အမျှ အနာပိုနက်လာတတ်ပြီး အစာအိမ်နံရံရှိ တစ်သျူးများ စားသွားခြင်းကြောင့် သွေးကြောများ ပေါက်ကာ သွေးယိုစီးခြင်း ဖြစ်တတ်သည်။(၂) အစာအိမ်လမ်းကြောင်းအတွင်း အသေးစားသွေးယိုစီးမှုဖြစ်လျှင် သွေးအားနည်း လက္ခဏာမှ တစ်ပါး အခြား လက္ခဏာ များခံစားရလေ့မရှိပါ။ သွေးအားနည်းလာလျှင် အရေပြား အရောင်ဖ...
တာကာယာစု (သို့) သွေးကြောကြီးရောင်ရောဂါ
on: 17 Sep, 2017
တာကာယာစု (သို့) သွေးကြောကြီးရောင်ရောဂါသည် နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောမကြီး (သို့) နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောမကြီးမှတစ်ဆင့် ပေးသော သွေးကြောများ ရောင်ရမ်းသော ရောဂါဖြစ်သည်။သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသည်။ရောဂါလက္ခဏာများ . မောပန်းလွယ်ခြင်း. ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း. ဖျားခြင်း. ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျခြင်း. ခေါင်းမူးခြင်း
on: 15 Sep, 2017
သွေးချိုပမာဏ အလွန်မြင့်တက်လာသောအခါ သွေးချိုဆိပ်တက်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက််တတ်သည်။ သွေးတွင်း သွေးချိုပမာဏသည် ၅၀၀ မီလီဂရမ် ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ မြင့်တက်လေ့ရှိပြီး သွေးချိုတိုင်းစက်တွင် အလွန်မြင့် (High) ဟု ပြလေ့ရှိသည်။ အချို့လူနာများတွင် သွေးချိုပမာဏ အလွန်မြင့်တက်နေသော်လည်း မည်သည့် ရောဂါလက္ခဏာမျှ မပြဘဲ ရှိနေတတ်သည်။ သို့သော် ထိုလူနာများသည် အချိန်မရွေး သွေးချိုဆိပ်တက်သည့် လက္ခဏာများ ပေါ်လာတတ်သည်။&n...
မိခင်နို့ရည်ကသာကလေးငယ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းမိခင်အများစုကနို့ထွက်မကောင်းတာကြောင့်ကလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပမာဏရဲ့ ၅၀-၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိကြပါတယ်။မိခင်အများစုနို့ထွက်နည်းရတဲ့အကြောင်းတွေကတော့စိုးရိမ်သောကတွေရှိနေတာ၊ဒေါသထွက်နေတာ၊ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေရှိနေတာ စတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။(၁)အစားအသောက်ကိုဂရုစိုက်ပါ။နို့တိုက်မိခင်တွေအနေနဲ...
ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အာဟာရတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီချို့တဲ့ရင် ကလေးတွေမှာ Rickets လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးပျော့ရောဂါ၊ လူကြီးတွေမှာ Osteomalacia လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးပျော့ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီကို အလုံအလောက်ရရှိခြင်းအားဖြင့် အရိုးကျိုးတဲ့ အန္တရာယ် နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရ အခြေအနေစစ်ဆေးမှုသုတေသန National Health and Nutrition Examination (NHANE)...
on: 10 Sep, 2017
အစာအိမ်ရောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အစာအိမ်အနာဖြစ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ စွဲသောက်ခြင်းနှင့် အရက်အလွန်အကျွံ သောက်ခြင်းများကြောင့် အစာအိမ်၏ အနားသတ် နံရံများ ရောင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။လက္ခဏာများ အစာအိမ်ရောင်ခြင်းသည် ရောဂါလက္ခဏာများကို အမြဲတစေ မပြတတ်သော်လည်း များသောအားဖြင့် ဗိုက်အပေါ်ပိုင်းတွင် မီးစနှင့် ထိုးသကဲ့သို ့အောင့်...